Ahoana ny fampiasana horonan-tsary ho an'ny varotra ny orinasa bitika kely trano. Martech Zone
Alarobia, Febroary 17, 2021 Alarobia, Febroary 17, 2021 Tom Siani
Fantatrao ve ny maha-zava-dehibe ny marketing video ho an'ny fisian'ny Internet anao asa fivarotana trano?
Tsy maninona ianao mpividy na mpivarotra dia mila mari-pahaizana marika mendri-kaja sy mendri-kaja ianao hisarika ny mpanjifa. Vokatr'izany, masiaka loatra ny fifaninanana amin'ny varotra trano ka tsy afaka manatsara ny orinasanao kely ianao.
Soa ihany, ny varotra niomerika dia nanome orinasa isan-karazany manana lafin-javatra ilaina mba hanatsarana ny marika. Ny marketing video dia paikady lehibe amin'ny marketing nomerika ary mahasoa amin'ny indostria rehetra, indrindra ny trano sy tany.
Raha te hianatra toro-hevitra mora ampiasaina ianao amin'ny marketing amin'ny vidéo mba hanamafisana ny orinasanao trano kely, dia avereno vakio ity lahatsoratra ity.
Fantaro ny tanjonao ary mamorona drafitra mifanaraka amin'izany
Voalohany, tokony ho fantatrao fa tsy afaka manomboka manao horonantsary ianao raha tsy misy tanjona sy drafitra. Ny marketing amin'ny horonan-tsary dia asa lafo vidy sy maharitra ary mila tetika feno sy marina.
Alohan'ny hirosoana amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary dia makà fotoana hamaritana ny tanjonao ary mamorona drafitra hahatratrarana azy ireo. Tokony ho fantatrao izay tena tianao ahatongavana sy ny fotoana ahatongavanao amin'ny valiny tadiavinao.
Ireto misy tanjona kendrena azonao raisina:
Isan'ny fahitana ny horonan-tsarinao isam-bolana
Ny tahan'ny fifamofoana
Raha te hahalala ny fahatezerana mirehitra amin'ireto dia mety mila manao fikarohana amin'ny fifaninanana ianao hahalalana ny valin'ny mpifaninana trano aminao.
Rehefa mamaritra ny tanjonao ianao dia afaka mamorona drafitra mifanaraka amin'izany. Miezaha manangana paikady matanjaka ary mifikira aminy. Mazava ho azy, satria vao manomboka ianao dia mety mila fanitsiana sasantsasany amin'ny dingana afovoany.
Mametraha teti-bola azo tanterahina
Ny dingana manaraka dia ny manombatombana ny vola ilainao amin'ny fampiharana ny trano sy tany video marketing strategy.
Ilaina ity dingana ity hahazoana antoka ny kalitaon'ny horonan-tsarinao. Tadidio fa ny famoronana horonan-tsary manintona dia mila fitaovana maro, ary avy eo, mila manokana teti-bola ampy ianao.
Tsy mila diso fanantenana ianao raha tsy mahavita teti-bola be; afaka manomboka amin'ny horonantsary vita an-trano sy rindrambaiko fanovana horonantsary maimaimpoana ianao.
Miezaha mianatra torohevitra DIY amin'ny famoronana horonan-tsary hampihenana ny vidiny. Afaka mandeha tsikelikely mitady fitaovana premium sy horonan-tsary matihanina bebe kokoa amin'ny orinasanao ianao.
Farito ny fomba tsy manam-paharoa
Tena soso-kevitra tokoa ianao hanana fomba tokana amin'ny varotra nomerika, indrindra amin'ny horonan-tsarinao. Ny tsy fivadihana amin'ity fomba ity dia manampy ny mpihaino anao hahafantatra anao rehefa afaka kelikely.
Ny fombanao, ao anatin'izany ny loko, ny feon'ny feonao, ny karazana fitantaranao, sns., Dia maneho ny toetranao marika. Miezaha mamaritra zavatra mangatsiatsiaka hisarika ny sain'ny mpihaino anao. Azonao atao aza ny mahazo valiny avy amin'ny mpihaino anao hanatsarana ny fomban-dahatsary.
Azonao atao koa ny mamaritra ny lohahevitry ny fahana ho an'ny hafatrao amin'ny media sosialy. Midika izany fa rehefa mahita ny sakafonao ny mpitsidika dia manana lohahevitra ankapobeny ny lahatsoratra. Ity dia fomba tsara iray hisarihana ny sain'ny mpanatrika amin'ny fitsidihana voalohany. Ohatra, azonao atao ny mahita ity lohahevitra fahana manaraka ity amin'ny Instagram:
Araka ny hitanao dia miaraka manao ny fomba ankapobeny ireo lahatsoratra ireo. Azonao atao ny manamboatra lohahevitra samihafa ho an'ny varotra horonantsary momba ny tany.
Humanize ny Real Estate Videos
Voaporofo fa arakaraka ny itiavanao ny mpihaino anao no mampitombo ny tahan'ny fifandraisanao.
Mbola zava-dehibe kokoa aza izany raha ny amin'ny fividianana sy fivarotana kapaoty na trano. Ny fanananao trano dia iray amin'ireo zavatra niainanao manokana tsara indrindra izay ahitana fihetseham-po sy fihetsika mahafinaritra.
Ka mila ampidirinao ao anaty horonan-tsarinao ireo fihetsem-po ireo ary lazao ny tantaranao raha jerena ny olana rehetra misy eo amin'ny mpihaino anao.
Ohatra, manandrama mangoraka amin'ireo mpijery momba ny vidiny lafo sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Raha tsorina dia tokony hataonao lohahevitra ho olombelona ny horonan-tsarinao mba hinoan'ny mpitsidika fa toa azy ireo ianao.
Safidio ny sehatra mety amin'ny marketing video
Tokony ho fantatrao fa ny fantsona nomerika rehetra dia samy manana ny mpihaino azy, noho izany dia mila mizara ny horonan-tsarinao amin'ny sehatra mety amin'ny trano sy tany ianao.
Ohatra, ny LinkedIn dia fantsom-piaraha-monina mifantoka amin'ny asa, ary maro ny matihanina amin'ny trano sy tany no manana kaonty. Vokatr'izany, tsara ho anao ny mizara ny horonan-tsarinao amin'ity sehatra ity.
Ny sehatra media sosialy ambony toy ny Facebook, Instagram, ary Twitter dia ilaina amin'ny marketing video anao. Ohatra, ny Instagram dia manana lafin-javatra mahasoa maro ho an'ny marketing amin'ny horonantsary toy ny lahatsoratra fahana, Tantara, horonan-tsary mivantana, IGTV, ary Reels. Tsy maintsy manao tombony betsaka amin'ireo endri-javatra ireo ianao mba hahitana ny fitrandrahana ambony indrindra.
Alaharo ny horonan-tsarinao
Ny horonan-tsary dia tompon'andraikitra amin'ny isanjaton'ny fivezivezena sosialy. Maro amin'ireo horonan-tsary ireo no noforonin'ny marika, noho izany zava-dehibe ho anao ny mialoha ny mpifaninana aminao.
Tototry ny horonan-tsary marobe ny mpampiasa, ary ambany dia ambany ny fahafaha-mahita anao. Fomba iray hanatsarana ny fahitana anao sy hametrahana ny horonan-tsary eo imason'ny mpampiasa maro kokoa ny fandaharam-potoana.
Ny ora tampon'ny Internet izay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona sehatra media sosialy dia miovaova arakaraka ny sehatra sy ny indostria. Ohatra, ny fotoana tsara indrindra handefasana amin'ny Instagram dia tsy mitovy amin'ny Twitter.
Ka tsara kokoa raha mampiasa fitaovana fandaharana amin'ny haino aman-jery sosialy ianao handefasana amin'ny fotoana mety indrindra ho an'ny indostriao ary hahazoana taha ambony ho an'ny horonan-tsarinao.
Ity misy ohatra iray amin'ny fampiasana fandaharam-potoana Crowdfire:
Ampiasao ny herin'ny fijoroana ho vavolombelona
Laza marika no lakilen'ny famporisihana ireo prospect ho tonga mpanjifanao. Ny fomba mahomby hanaovana izany dia ny famelana ny mpanjifa teo aloha hiresaka amin'ny anaranao. Ny fijoroana ho vavolombelona dia zava-dehibe amin'ny orinasa kely satria mitondra fahatokisana izy ireo ary mahazo aina tsara ireo vinavina vaovao.
Raha lasa tompona trano sambatra ny mpanjifanao dia mety hiresaka momba ny marikao izy ireo. Mila mifandray amin'izy ireo ianao ary mandrisika ny fampielezana fijoroana ho vavolombelona mihitsy aza. Andramo apetraka ao amin'ny pejy fandraisan'ny tranokalanao ny horonantsary fijoroan'izy ireo hampahafantatra azy ireo fa zava-dehibe ny hevitr'izy ireo.
Ity misy ohatra iray amin'ny fijoroana vavolombelona tsara avy amin'ny Youtube:
Manatsara ny halavan'ny horonan-tsarinao
Na ny halavan'ny horonan-tsarinao aza dia misy akony lehibe amin'ny ROI amin'ny varotra horonantsary momba ny tany sy trano. Amin'ny ankapobeny dia aleon'ny mpampiasa sosialy horonan-tsary fohy sy mahafinaritra. Izany no mahatonga ny fampisehoana horonan-tsary fohy toa ny Reels na TikTok.
Mazava ho azy, miankina amin'ny indostriao sy ny sehatra zarainao ny halavan'ny horonantsary mety indrindra. Hanombohana azy, azonao atao ny mandinika horonantsary maharitra 2 minitra ny halehiben'ny horonantsarinao.
Azonao atao ihany koa ny mamorona horonan-tsary lava kokoa ho an'ny sehatra toa ny Youtube sy IGTV ary avy eo mizara kinova fohy amin'ireo horonan-tsary ireo amin'ny sehatra hafa. Amin'ity fomba ity, azonao atao ny mamporisika ny mpihaino anao hanamarina ny mombamomba anao amin'ny sehatra hafa.
Fakafakao ny fahombiazanao amin'ny varotra horonan-tsary
Tadidio fa tsy misy tetika hijanona ho lavorary mandrakizay. Amin'ny maha-orinasa kely trano sy trano efa manomboka video marketing, mety mila mamerina mijery ny paikadinao ianao isaky ny misy fotoana.
Miezaha mamakafaka ny zava-bitanao ary tadiavo ireo fahalemenao sy ny tanjanao. Rehefa mahatsapa ny horonan-tsary tsara sy faran'izay ratsy indrindra ianao dia afaka manatsara ny horonan-tsarinao amin'ny ho avy ary mahazo ROI avo kokoa.
Ity misy ohatra iray amin'ny fitaovana fandinihana ao amin'ny Twitter:
Fitsapana A / B
Na manao ahoana na manao ahoana fahaizanao mamorona horonan-tsary dia mila fantatrao hoe karazana video, fanazavana, tenifototra ary zavatra maro hafa manintona ny mpihaino anao. Ny fanandramana A / B dia fomba mahasoa hahalalanao ny fihetsiky ny mpihaino anao amin'ny zavatra samihafa ao amin'ny media sosialy / tranokalanao.
Ohatra, azonao atao ny manova ny tenirohy nataonao ho an'ny horonantsary manokana ary mandefa ny dikanteny roa hanarahana ny fihetsika nasehon'ny mpanaraka anao ara-tsosialy azy ireo. Ity dia voaporofo fa fomba tsara hanatsarana ny hafatrao arak'izay mahaliana ny mpihaino anao.
Disclosure: Martech Zone dia nampiditra rohy mpiara-miasa amin'i Crowdfire.
Tags: ab testinglazan'ny marikafirehetam-bahoakahoronantsary fijoroana vavolombelona an'ny mpanjifafijoroana ho vavolombelona momba ny mpanjifahashtagvarotra sy hofa fananana mifakavarotra tranofijoroana vavolombelonahoronantsary momba ny trano sy tanyhoronantsary realtorhoronantsary fijoroana vavolombelonaanalytics amin'ny twitterfanazavana videohalavan'ny videovideo marketing
Tom dia manam-pahaizana amin'ny marketing an-tserasera manana traikefa mihoatra ny 5 taona amin'ity indostria nomerika ity. Izy koa dia miara-miasa amin'ireo marika fanta-daza sasany hahafahana mamorona fifamoivoizana, mamorona fantsom-pivarotana ary mampitombo ny varotra an-tserasera. Nanoratra lahatsoratra be dia be momba ny varotra media sosialy, marketing amin'ny marika, bilaogy, fahitana amin'ny fikarohana, sns izy.